भिडियो – Page 576 – Etajakhabar
मरेको चितुवा भन्दै सेल्फी लिन खोज्दा चितुवाले पछाडीबाट एक्कासी झम्टिएपछि हंगामा, हेर्नुहोस् भिडियो
एजेन्सी । भारतमा दुई युवाले राजमार्गमा सुतिरहेको चितुवाका अगाडी शेल्फी खिच्दा आक्रमणमा परी घाइते भएका छन् । भारतको राजस्थान उदयपुर जिल्लामा गाडीको ठक्करले घाइते भएको चितुवालाई मरेको ठानेर सेल्फी लिmन खोजेका युवकलाई चितुवाले एक्कासी आक्रमण गर्दा उनीहरु घाइते भएका हुन् । मोटरसाइकलमा आएका दुई युवकले त्यो चितुवासँग सेल्फी लिन खोज्दा अचानक चितुवा उठेर दुईमध्ये एकलाई झम्टियो । चितुवाको पकडमा परेका ती...
तिलिचो तालमा नग्न भेटीए पर्यटक : हाम्रा हिमाल र ताल विदेशीलाई गुप्तागं देखाउने स्थल बन्न दिनुहुन्न ( भिडियो )
काठमाडौँ । तिलिचो ताल विश्वको सबैभन्दा बढी उचाईमा रहेका तालहरूमध्येको एक हो । हिमालय पर्वत शृङ्खला अन्तर्गत नेपालको मनाङ जिल्लामा अन्नपुर्ण क्षेत्रभित्र पर्ने यो ताल समुद्र सतहदेखि ४९१९ मिटर उचाईमा छ । तालको लम्बाई ४ किलोमिटर, चौडाइ १।२ किलोमिटर र गहिराई सरदर २०० मिटर अगाडी बसेर इजरायली पर्यटक नग्न बनेर तालको अगाडी खिचाएको तस्विर अहिले भाइरल बनिरहेको छ । जुन कुरा नेपाल र नेपाली संकृति माथिको...
दुर्गेस थापा हेर्न केटीहरुको हानथाप, कपडा खेलेरै स्टेजमा उत्रिए दुर्गेश
पछिल्लो समय चलेका मोडल हुन् दुर्गेस थापा । उनी मोडलमात्र होईनन् गायक पनि हुन् । पोखरामा जारी लेखनाथ महोत्सवमा मंगलबार दुर्गेस थापा हेर्नेको लागी हजारौंको भिड लाग्यो । साँझमा राखिएको दुर्गेशको स्टेजमा भिड नियन्त्रण गर्न समेत आयोजकलाई हम्य–हम्य पर्यो । बिशेषत् केटाहरु भन्दा केटीहरुको बाग्लो उपस्थिती रहेको उक्त समयमा थापाले नृत्य होईन आफ्ना गीतसंगीत प्रस्तुत गरे । उनले आफ्ना फ्यान धेरै देखेपछि लगा...
चर्चित गायिका ज्योती मगरको नयाँ गीत ‘स्याल कुखुरी’ सार्वजनिक, भिडियोमा हट अवतारमा देखिइन् ज्योती
काठमाडौँ । चर्चित गायिका ज्योगी मगर र गायक तेजस रेग्मीको अवाजमा सजिएको रमाइलो गीत स्याल कुखुरी’को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छोटो समयमा नै गीतले सांगीतिक बजारमा राम्रो चर्चा कमाइरहेको छ । तेजसकै शब्द तथा संगीत रहेको गीतको भिडियोलाई निर्देशक सरोज रोशन भट्टराइले रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । सुजन शाहीको सम्पादन रहेको भिडियोमा यादव देवकोटा, ज्योती मगर र राज...
बस्ति हस्तान्तरण गर्ने बेलामा किन यस्तो भावुक कुरा गरे धुर्मुसले? भिडियो सहित
सन्तपुर बस्ति हस्तान्तरण गर्न अब २३ दिन बाँकी रहदै गर्दा मंगलबार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ फेसबुक लाइभमा आएका छन्। बस्ति निर्माणका लागि अझै ८० लाख रुपैंया अपुग रहेको र सहयोग गर्न अपिल समेत गरे। फेसबुक लाइभमा कुरा गर्दै गर्दा धुर्मुस निक्कै भावुक देखिन्थे। बिदेशिएकाहरुले आफ्नै सन्तानलाइ बाउ आमा हुँ भनि चिनाउनु पर्ने देशको बाध्यताका कुरालाई समेट्दै गर्दा उनि अझ धेरै भावुक देखिन्थे।हेरौं सन्तपुर बस...
गल्ती न गरेका सागर किन डराउने ? फेसबुक लाइवमा आएर सागरले यसो भने भिडियो !!
नेपाल आइडलमा संघर्ष गरिरहनुभएका सागर आले मगर टप फोरमा सुरक्षित भएका थिय। निशान भट्टराईसँगै सागर पनि टप फोरमा पर्न सफल भएका हुन । सबैको मन जिती सकेका यि प्र्तिस्पर्धी, थोरै भोट्का कारण आज नेपाली आइडल बाट बाहिरिय पनि नेपालीहरुको मन मुटु छुदै अहिले आफ्नो गित संगीत लाइ निरन्तता दिदै खुब चर्चा कमाउन सफल भएका छन् | अस्ति भर्खर अस्ट्रेलियाबाट सागर आलेको गलत समाचार उनको बारेमा युटुब मार्फत सार्बजनिक...
धिरज र रबि मिलेर राख्दै नयाँ रेकर्ड
पोखरा । गायक धिरज राईले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको सन्देश विश्वभर फैलाउन गिनिज बुक अफ दि वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने प्रयास थालेका छन् । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ५० हजार व्यक्तिभेला भएर बुद्धको उपदेश पढेर नयाँ रेकर्ड बनाउने तयारी गरिएको उनि बताउछन् । उनले यस अगाडि नै नेपालसहित विभिन्न देशमा यो अभियानलाई आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढाइरहेका थिए । आफ्नो फेसबुकमा लाइक गरेर होस् या तस्बिरमार्फत होस्, बुद्ध नेपाल...
मुकुन्देलाई गालि गर्ने र उनलाई नचिन्ने सबैले हेर्नै पर्ने भिडियो
काठमान्डौ केहि सम - य अघि रत्नपार्क रुखमा बसेर तथानाम बोल्ने मुकुन्द घिमिरेलाई तपाइले बिर्सनु भएको छैन होला। उनि नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व गरेर अघि आउन नसके पनि समाजमा रहेर हरेक कुराको विश्लेषण गर्ने मध्येका एक हुन्। रत्नपार्कलाई केहि व्यवस्थित पार्दै जाँदा उनि बस्ने रुखहरु ढलाइए पछि अचेल उनि भृकुटी मण्डप वरपर देखा पर्छन्। हिमचुली खबरको टिम त्यहाँ पुग्दा मुकुन्द घिमिरे उर्फ मुकुन्देका वरपर थुप्र...
गायक रामकृष्ण ढकाल आए यमराजसँग मित लगाएर
काठमाडौं । कसले सोच्न सक्ला यमराजसँग मित लगाउँने कुरा ? नराम्रो काम गरेमा मरेपछि यमराजले सजाय दिन्छन् भन्ने त सुनिएको हो र मित नै लगाएर कोही मान्छे फर्किएला ? यो त कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो तर यहाँ एक जना शिक्षक यमराजसँग मित लगाएर फेरि पनि मानवीय संसारमा फर्किएका छन् । यसरी यमराजसँग मित लगाएर आफ्नो वास्तविक कथालाई नै गीतको रुप दिएर अब्बल श्रष्टा समेत बनेका व्यक्तिको नाम हो सुन्दर पन्त । अनि उ...
इराकमा यी नेपाली चेलीको दर्दनाक पिडा, घर मालिकको चरम यातना पछि १३ दिन बेहोस्
पोखरा - विगत तिन बर्ष पहिला घरेलु कामदारको रुपमा इराक जानु भएकी नेपाली चेली शान्त राइ इराकमा त पुग्नु भयो तर कामको २ बर्षे दौरानमा घर मालिकको कुटपिट बाट सख्त घाइते भै फर्कनु भएको थियो। निकै दुखदायी यो घटनामा विभिन्न देशमा कामदारको रुपमा पुग्नु भएका नेपालीहरु मलम बनेर उभिएको छ। सान्ता राइको उपचारको लागि यति बेला भिविन्न देश बाट सहयोग रकम आउनेक्रम बढ्दो छ। यसै क्रममा इराक़को कुर्दिस्तान प्रान्...
Previous 1 … 575 576 577 … 674 Next
-19967 second ago
-19147 second ago
-17701 second ago
-15969 second ago
-14818 second ago
-14020 second ago